“Xal loo helay dhibaatada abaaraha deegaannada Soomaalida” | Berberanews.com
Home WARARKA “Xal loo helay dhibaatada abaaraha deegaannada Soomaalida”
“Xal loo helay dhibaatada abaaraha deegaannada Soomaalida”
“Waa cunto xiran oo budo ah taas oo neefka ka kaafineysa baahida oo laga sameeyay 18 nooc ah oo cunto ah” ayuu yiri Cabdi Xasan.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in neefka Geela iyo lo’da irmaanka ah ay u diyaariyaan calaf ka qeybqaadanayo sare u qaadidda caanaha ay soo saaraan isla markaasna maalinkii la siinayo oo kaliya ah 2.5 Kilo.
Suufi ayaa sidoo kale xusay in lo’da ay ugu talagaleen nooc ka qeybqaadanayo naaxinta dibida dhaqaalka ah si muddo yar ay u koraan.
“Tusaale ahaan, bil iyo bar illaa saddex bilood, in neefka dibiga ah lagu gaarsiiyo 350 Kiilo iyadoo lugta laga xirayo, lana siinayo cuntadan casriga ah, wax kalena u baahaneyn” ayuu yiri Cabdi Xasan Suufi.
Previous articleFannaanad caan ah: Isticmaalka baraha bulshada ‘aad buu ugu xunyahay’ dhalinyarada
Next articleAllaa Hibada Siiyaye, Siiya Ducada, Madaxwayne Saylici